FASAL CANAB "VELES" - VITICULTURE
Kuwa doonaya inay ku koraan guriga ama dal canabku waxay inta badan ku qaataan wakhti badan si ay u helaan noocyada ugu fiican iyaga naftooda.
Oo waxay u sameeyaan sabab sababtoo ah: waxaa wanaagsan in la qaato laba maalmood oo lagu falanqeeyo barta internetka marka loo barbardhigo baadiyaha koowaad ka dibna dhowr sano ka dib iska daa.
Hoos waxaa ku yaal waxaan rabnaa in aan si aad u faahfaahin leh oo leh mid ka mid ah noocyada ugu caansan uguna firfircoon, taas oo ah habboon ee koraya on sirqoollada guriga - canab Veles.
Intaa waxaa dheer in mugga ballaaran ee goosashada, taas oo lagu gaari karaa leh baadiyaha hal, canab ah naftooda waxay leeyihiin muuqaal qurux iyo dhadhan.
Waad ku qanacsan tahay, waxaanu ka sheekeyn doonaa wixii ku saabsan dhibaatooyinka.
Maxaa ka farxin Velez, canab ah ilaahii bacriminta?
Kala duwanaantan canabkani maaha wax loogu yeero magaca ilaah Slavic oo masuul ka ahaa bacriminta. Canabka Veles dhab ahaantii waa mid bacrin ah, taas oo mudnaanta weyn ee noocyada waalidka: "Sofia" iyo "Rusbola".
Taasi waxay keentay in la soo gudbiyo noocyo kala duwan by breed Zagorulko, oo ku hawlan viticulture sida hiwaayadda, iyo thanks to xaaladaha cimilada wacan, a canab joogto ah ku dhashay dhalashada. Maanta noocyada kala duwan ayaa si ballaaran loogu qaybiyey Ukraine, koonfurta Belarus, iyo sidoo kale gobollada Bartamaha iyo Koonfurta Ruushka.
Muuqaal iyo cabbiraad of cluster ee canab "Veles"
Miisaanka iyo xajmiga celceliska isku xirnaanta, kaas oo u kobcaya noocyada geedaha ee sabiibka ah "Veles", ayaa loo saari karaa xajmiga weyn iyo weynba. Gaar ahaan, inta badan xayawaanaadka inta lagu jiro xilliga bisaylka la kala saari karo waxay awood u leeyihiin inay gaaraan tiro ka badan 3 kiilo, iyo kooxaha ugu yar oo miisaankoodu yahay 0.6 kiilo garaam.
Dhererka farabadani waa celcelis ahaan 18 sentimitir, ballaadhkuna wuxuu noqon karaa ilaa 13. Isla mar ahaantaana, qaab-dhismeedku waa mid aad u dabacsan, berry ahna aan si adag loo dhigin, wuxuu leeyahay laanta badan. Sababtoo ah qaabkeeda casri ah, rucubyadu waxay u muuqdaan kuwo aad u qurux badan,
Miraha ku yaal faraska ayaa sidoo kale leh muuqaal qurux badan iyo cabbir. Waxay miisaanayaan 4-5 garaam, waxay ku kala duwan yihiin maqaarka casaan iyo saxarada qallalan. Isla mar ahaantaana, sababtoo ah cufnaanta sare ee saxarka, taas oo miraha ka maqan ama gabi ahaanba ma dareemay, miraha ka mid ah canab Veles yihiin kuwo aad u dabacsan. Maqaarka berry canabka ah ee noocyada kala duwan waa dhuuban, cuntaduna sidoo kale ma dareemin. Marka ay cunaan, waxaa jira caraf aad u kala duwan oo ah musqul.
Miisaanka beergooyska ee canab "Veles": Maxaa ka farxin doona noocyada kala duwan
Ma aha in la ogaado dhalidda sare ee kala duwan ee this canab ma suurtagal. Waad ku mahadsan tahay geedaha xoogga leh iyo kartida aad u heli karto goosashada pasıkis, qiyaastii 4-6 kiilo oo canab ah waxay ka helaan hal baadiyaha. Laakiin, iyada oo daryeel fiican leh, mugga ayaa kor u qaadi kara. Arrin muhiim ah waa xasiloonida dalagga, iyada oo aan loo eegin da'da baadiyaha.
Waxaa habboon in la fiiriyo xaqiiqda ah in kala duwan tani leedahay waqti aad u gaaban ee Bisaylkiisa dalagga. Xilliga sii kordhaya ee baadiyaha canabku wuxuu soconayaa 95-100 maalmood. Iyada oo iftiin baadiyaha wanaagsan iyo xaaladaha cimilada wanaagsan, goynta ayaa suurtagal ah bilowga bisha August. Sababtaas awgeed waa noocyada kala duwan ee ku habboon cimilada ee Ruushka Central iyo gobolka Moscow, maadaama ay hayso waqti ay ku hagaagto bilawga cimilada qabow.
Haddii tallaabooyinka, kuwaas oo aad u badan oo ku sameeyay duurka, dalagga sidoo kale waxaa la aasaasay in aad go'aansatay in aadan ka saarin, ka dibna waxaa suurtagal ah in ay ka saaraan la yimaad October. Dabcan, xaaladaha cimilada wanaagsan ee gobollada Bartamaha iyo Koonfurta Ukraine waxay lagama maarmaan u yihiin da'dooda.
Faa'iidooyinka "Veles": Maxaa ku faani kara noocyada kala duwan ee canabka?
• Saamaynta ballaaran ee miro-tayo sare leh shuruudaha oo dhan.
• Bisaylkii hore ee dalagga.
• Cimilada xasiloon oo qallalan, canab iyo rucubyadu waxay awood u leeyihiin inay ilaaliyaan muuqaal qurux badan oo dhadhamiyaan muddo dheer (ilaa 1.5 bilood). Berry ma qalloocinayaan iyaga u gaar ah.
• Sababtoo ah cufnaanta cawska canabka Veles, miraha aan dhaawac laheyn waxay keenaysaa gaadiidka muddada dheer.
• Gawracatada ma dhaawacmin marka heerkulka hawadu hoos u dhaco -21 ° C, si kastaba ha ahaatee, dalaggu wuxuu u baahan yahay hoyga xilliga jiilaalka. Indhaha weyni way dhib badnaan kartaa.
• Joogitaanka ubax bisexual ah ayaa fududaynaya sifooyinka tufaaxa iyo beeritaanka noocyada kala duwan.
• Canabadu waxay leeyihiin celcelis iska caabin ah cudurada fungal kuwaas oo ku badan cagaarka: xayrta budada ah iyo oidiyoon.
Maxaa laga yaabaa inay niyadjabaan canab "Veles": cilladaha kala duwan
Nasiib daro, laakiin goosashada ugu wanaagsan ee noocyada la tilmaamay ayaa si weyn u saameeya xaaladaha cimilada xun, gaar ahaan qoyaan badan iyo roobab badan. Xaaladdan oo kale, berry, crack, taas oo keena inay kalluumaystaan. Xaaladaha cimilada ee la midka ah, waa lagama maarmaan in la beero dalagyada waqtigeeda ku haboon oo ku kaydi qolalka qalalan.
Dhibaatooyinka waxaa ka mid ah xaqiiqda ah in noocyada kala duwan ee Veles ay yihiin kuwo aad u da 'yar isla markaana aan weli la baarin weli. Sidaa darteed, iyada oo ku xidhan xaaladaha sii kordhaya iyo xaaladaha cimilada, waxay muujin karaan sifooyin kale oo aan fiicnayn. Tani waxay si gaar ah u tahay mid iska caabinaysa cudurada iyo cayayaanka. Sidaa darteed, si aan u lumin in goosashada sabiib ah, waxaa lagula talinayaa in ay ku buufiyaan baadiyaha leh diyaar garow guud oo khaas ah.
Maxay tahay arrin gaar ah oo ku saabsan beerashada Veles canab: Macluumaadka lagama maarmaanka ah iyo tilmaamaha
Astaamaha siddooyinka ee canab ah "Veles"
Wixii noocyada noocaas ah waa suurtagal ku dhawaad ​​dhammaan noocyada beerto canab, marka laga reebo abuurka abuurka. Waxaa ugu fiican in la iibsado geedo fasalka this ee xanaanada gaarka ah, kaas oo lagu kori karo xididadooda ama la gooyey rootstocks kale.
Waxaad samayn kartaa gooyn goosgooska madaxbannaan ee baadiyaha ka soo baxa, iyaga oo ku dhex jira ciidda kadibna geedka, ama dhirta duug ah. Tayada qoryaha koraya si toos ah kuma tiirsanaan habka beeritaanka, kaliya marka ay dhacdo in la saaro kaydka dukaanka ah, geedku wuxuu awoodi doonaa inuu horumariyo wax badan oo dhakhso ah wuxuuna bilaabaa inuu midho u dhasho.
Guga iyo xilliga dayrta ee canabkiisa "Veles"
Su'aasha ah sida saxda ah ee waqtiga sanadka si ay canab beerto waa mid aad u daran. Xaqiiqdii, xaalad kasta, waxaa jira laba arji iyo cillado.
Waqtiga gu'ga waa xaqiiqada ugu wanaagsan ee lagu beerayo geedo iyo geedka. Ka dib dhan, waxaa jira xilli diiran iyo xilli sii kordhaya, inta lagu guda jiro baadiyaha cusub waxay yeelan doontaa waqti ay ku qaadato xidid iyo koraan si ay u noolaadaan jiilaalka kowaad. Intaa waxaa dheer, Canabka Veles lagu beeray guga horaantii xilliga xagaaga labaad ee sii kordhaya ayaa laga yaabaa inuu ku farxo inflorescences ugu horeysay iyo dalagyada.
Si kastaba ha ahaatee, xilliga gu'ga waa wax aad u adag in la helo macdanta la rabo oo aan waxyeello lahayn iyo jarista ayadoo xanaanooyinka si fudud loo dhigo dayrta. Marka beeritaanka guga sidoo kale waa mid aad u muhiim ah in aan si xun u dhicin wakhtigii degitaanka: waxay ka soo bixi kartaa maalmaha ugu dambeeya Maarso ilaa maalmaha ugu dambeeya May. Marka hore la beero waxaa muhiim ah in la dhigo laalaabka.
Beerashada xilliga dayrta waa mid wanaagsan sababtoo ah xilligan ma'ahan oo kaliya ma heli karto wax badan oo malab ah oo geedo ah, gaar ahaan, "Veles" kala duwan, laakiin sidoo kale waa in ay ka shaqeeyaan wax ka yar. Xaqiiqdu waxay tahay in dhibaatada kale ee guga ay tahay badi carrada qalalan, taas oo u baahan in badan oo waraabiyo. Xilliga dayrta, waxay noqon doontaa mid ku filan in lagu mayro oo keliya canab beeray, si ay u daboosho oo ay iska ilowdo ka hor bilowgii kulaylka guga.
Dhab ahaantii, saamaynta abuurista waxay noqon doontaa isla sidii guga, sababtoo ah cimilada qabow, sapling ma kori doono, waxaa si fudud loo kaydiyaa ciidda. Laakiin sida "kaydinta" sida ugu macquulsan ee waxyeellada ah ee seedling by heerkul hooseeyo iyo barafka ee ciidda waa mid aad u sarreeya. Sidoo kale, haddii ay xun tahay in lagu daboolo, dhammaan qoyaanka ayaa ka soo baxaya sapling oo leh dhaxan, taas oo yarayn doonta isdhexgalka.
Goobta canab beerto: waxa aad u baahan tahay inaad ka ogaato xayeysiisyada "Veles"?
Ku dhawaad ​​dhammaan noocyada canabka ah waxay leeyihiin muuqaal noocan oo kale ah sida xoog ku tiirsanaanta iftiinka wanaagsan iyo meel aad u kacsan si ay u koraan. Qorraxda iyo kuleylku waa fure u ah Bisaylka degdeg ah ee dalagga, iyo maqnaanshaha qabow-qabow - ilaalinta of inflorescences.
Canabka carrada "Veles" wuxuu jecel yahay bacrin, isagoo leh awood wanaagsan si uu u dhaafo qoyaan. Ciidda xad dhaafka ah ee qoyan ayaa si aan caadi aheyn ugu habboon noocyada kala duwan, maadaama ay taasi keeni karto burburinta berry. Waxaa wanaagsan inaad doorato carrada madow ama si aad uhesho cirbadaha caanaha ah, adigoo ku daraya bacriminta si loo abuuro nidaam dheeri ah. Sidoo kale, waxaa muhiim ah in la doorto meelahaas dhulka biyaha aan kor u dhaafin 1.5 mitir xitaa roobab culus.
Marka la beero dhowr duurka, sidoo kale waa mid ku haboon in la tixgeliyo fogaanta lagama maarmaanka u dhaxeeya iyaga: si tartiib ah u noqoshada 1-1.5 mitir.
Xaqiiqdu waxay tahay in noocyada kala duwan ee baadiyaha ayaa leh koboc aad u wanaagsan, taas oo ay u baahan tahay meelo badan. Haddii ay duurka waxaa lagu beeray si aad u qoto dheer, waxay wadaagi karaan midba midka kale. Canab waxaa badanaa lagu beeraa derbiyada dhismayaasha, kiiskan oo kale waxaa lagama maarmaan ah in laga baxo dhismaha ugu yaraan 0.7 mitir si aysan saldhig u noqonin horumarinta nidaamka asaasiga ah ee baadiyaha.
Beerto geedo canab "Veles": Amarka hawsha
Ka hor inta beerto, waa mid aad u muhiim ah in la doorto sapling laftiisa. Jiil caafimaad leh oo cilad ah ayaa leh xididada cad iyo cut a cagaaran. Geedo guga koray on xididdadiisa u gaar ah, leeyihiin caleemaha cagaaran leh caleemo. Ka hor inta laga beerto, xididdada seedling waa in lagu rusheeyaa biyo maalin ama laba, iyo sidoo kale lagu daaweeyaa xal in awooda in la kobciyo formation xidid. Xalka noocan oo kale ah ayaa lagu sameyn karaa iyada oo ku saleysan daroogada "Humate", oo diiradda lagu saaro 1 litir oo biyo ah oo aan ka badnayn 10 dhibcood.
Diyaarinta Pit iyo beerto ee seedling laftiisa ayaa sidoo kale leh nuucyo badan:
• Waxa lagu talinayaa in la diyaariyo godkii hore wax badan ka hor intaan la dhicin. Wixii beerto geedka canab, waa in la sameeyaa xilliga dayrta si ciidda ay u wanaagsanaato. Marka beerta qoynta lagu qodo 2 toddobaad. Ka sokow godka, waxaa muhiim ah in la diyaariyo goobta horay: qodo iyo bacriminta.
• Qoto dheer iyo ballaadhka godadka waa inay ahaadaan ugu yaraan 0,8 mitir. Tani waxay ku dhejin doontaa lakab wanaagsan oo bacrimin ah oo hoos ku xusan: humus iyo Bacriminta macdanta lagu qaso ciidda bacrin ah. Markaad buuxiso isku dar ah qaybta hoose ee godadka, waa muhiim inaad ku daboosho carrada sahlan, taas oo ka dhigi doonta suurtagal in aan gubin xididdada seedling inta lagu guda jiro beerashada.
• Qoryaha waxaa lagu dhejiyaa god yar oo qoto dheer oo xididada xididkoodu ka sarreeyo dusha ciidda. Haddii ceelku cusub yahay, waxaad kor u qaadi kartaa carrada xitaa 5 sentimitir. Buryaha geedaha canabkuna waa inay si taxadar leh oo tartiib ah u sameeyaan, isku dayaan in aysan waxyeelaynin xididada, laakiin ha ka tagin barkinta shilalka meel u dhow. Sidaa daraadeed, adigoo godka ku qoday oo kaliya nus, waxaa lagula talinayaa inaad ku shubto baaldi biyo ah kadibna dhameystir hawlaha.
• Ka dib markii la beeray geedo canab ah waxaa lagu shubay 2-3 baaldiyo oo dheeraad ah oo biyo ah (iyadoo ku xiran qoyaanka ciidda) iyo mulch ciidda ku wareegsan.
• Inkastoo ciidda ay dabacsan tahay, waa lagama maarmaan in la helo taageero xooggan oo u dhow dhoofka. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku hagto koritaanka geedka canabka ah ee jihada aad rabto.
Sida loo xoqdo "Veles" canab ah oo ku yaalla kaydkii hore?
Si aad uhesho faashad faashad oo wanaagsan, waxaad u baahan tahay inaad soo qaadato jirid wanaagsan iyo saamiyo wanaagsan. Xididku wuxuu ka soo go'ay Veles grapevine oo waa in la dhajiyo (nidaamkani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku hayso qoyaanka si aad u dheer). Qaybta hoose ee jarida waa in la gooyaa xawaare, kaas oo u adeega saldhig u ah rooting wanaagsan. Sidoo kale, qaybta cut-off-ka ayaa lagu hayaa biyo iyo xal xidid ka hor inta aan la jarin.
Marka si fiican loo dhajiyo ka dib markii ay ka soo saarto baadiyaha iyo saamiyadii hore ee gaboobay, jirida ayaa la dhigayaa oo keliya qaybta la jarjaray. Taas ka dib, saamiyada si adag ayaa loo adkeeyay iyada oo la adeegsanayo dhar ama xargo. Haddii saadku uu yahay mid ballaaran - in ka badan hal goyn ayaa la gelin karaa. Si aad u ilaaliso qoyaanka ee stock iyo gooyn, waxaa lagu talinayaa in ay daboolaan goobta qalliinka leh dhoobo qoyan iyo cover.
Si kooban oo ku saabsan sifooyinka daryeelka ee canab "Veles"
Wixii koritaanka ugu wanaagsan ee baadiyaha iyo formation of goosashada, canab u baahan badan oo qoyaan. Inta badan, ma aha lagama maarmaan in la baadho baadiyaha, sababtoo ah waxay leedahay nidaam xidid adag oo awood u leh in ay si madaxbanaan "soo saaraan" qoyaan ka soo ciidda. Si kastaba ha ahaatee, intii lagu guda jiray geedi socodka daaqsinka ugu muhiimsan ee waraabinta waa lagama maarmaan in la fuliyo waxyaabaha soo socda:
• Waqtiga ugu horreeya ee ku hari yar ee geedka canabka ah
• Ka hor intaadan ubaxin
• Waqtiga sameynta canab ee digirta.
Si loo abuuro waraabin waxtar leh, waxay sameeyaan ficil kale oo muhiim ah: waxay daboolaan ciidda agagaarka geedka canabka ah. Marka lagu daro qoyaanka ka soo baxa uumiga, mulch sidoo kale waxay u adeegtaa sida bacriminta aad u fiican. Xaqiiqdu waxay tahay in mulchka ugu fiican uu yahay dhoobo iyo madow, boodhka qoyan, peat iyo humus, taas oo, waqti ka dib, jajabaan iyo saturate ciidda leh canab cunto.
Waxay u fiicantahay in lakabka lakabka laga sameeyo ilaa 3 sentimitir si aysan u horjoogsanin in hawada lagu soo galo ciidda.
Waxaa kale oo xiiso leh in la akhriyo oo ku saabsan canab qurub-duurjoogta ah
Laakiin, mulch ma awoodo in ay buuxiso shuruudaha dhan ee bush ee sabiib ah ee dharka ugu sareeya, sidaas darteed, marmar ahaan humus, potassium iyo fosfooraska waa in lagu daraa ciidda qashin ama xal. Waxaa habboon in la tixgeliyo in bacriminta xad-dhaafka ah ee bacriminta ay waxyeello u keeni karto canab, sidaas darteed waa muhiim inaan la dhaafin.
Ka hor inta bilowga jiilaalka ama guga hore, geedka canabka waa la gooyaa. Gooyo maaha oo kaliya inaad u sameysid qaabka saxda ah ee baadiyaha, laakiin waa kicin fiican oo lagu kordhinayo tayada dalagga. Wixii baadiyaha ah ee canab "Veles" waxay si wanaagsan uga saari karaan qiyaastii 6-8 godood. Ku dhaaf wax ka badan 4 xabbo. Iyada oo suurtagal ah in dhaxan daran, gaabin geedka canabka ah wuxuu noqon karaa mid xoogan. Sidoo kale, qaybo la gooyey iyo waxyeelo geedka canabka ah, kuwaas oo si buuxda loo saaray iyo gubay.
Waxaan mar hore soo sheegnay in noocyada kala duwan ay u baahan yihiin hoyga jiilaalka. Iyada oo la barbardhigo oo keliya geedo yaryar, way sahlan tahay in hawshan la fuliyo: waxaad isticmaali kartaa balaastig caag ah oo leh meel hoose ama mid kale oo weyn oo aan lahayn hoos. Waxaa la dhigaa koritaanka seedling iyo gebi ahaanba daboolay ciidda ilaa guga. Boogaha waaweyn iyo kuwa qaangaarka ah waxaa lagu daboolay filim, kaas oo wax u eg sida tunnel la abuuray. Sidoo kale, for dhirta shtamb jiilaalka sida mulch qarux badan qariyey.
Laga soo bilaabo jabinta cudurrada fangas si loo ilaaliyo duurjoogta waxay u oggolaanaysaa buufin gaar ah, kaas oo lagu dabiibayo sanad walba. Inta jeer ee lagu buufin karo waa in ay ahaataa ugu yaraan 3 jeer xilli ciyaareed (waxaa la samayn karaa isla waqtiga la waraabiyo). Cagaarshowga ayaa sida caadiga ah loo isticmaalaa mashiinka, laakiin waxa ay u fiicantahay in la doorto daawada gaarka ah ee nooca cudurka ee ka dhigi doonta dagaalka ka soo horjeeda waxtar badan.